Inqaku leRedmi 8 Pro iya kuba nokupholisa ulwelo | I-Androidsis
Inqaku elibomvu leRedmi 8 Pro liza kufika nokupholisa ulwelo
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwaqinisekiswa ngokusesikweni umhla wokufayilisha yeNqaku 8 kunye neRedmi Qaphela iNqaku le-8. Ezi ntsuku iinkcukacha zikhutshiwe malunga Ezi fowuni zimbini ziphakathi kuluhlu lwesiTshayina, ezijolise ngokucacileyo kubaphulaphuli bemidlalo. Sikwazile ukuyibona ngokhetho lweeprosesa zayo, kwaye idatha entsha iyakuqinisekisa.
Ubuncinci kwimeko yeRedmi Qaphela i-8 Pro, kubonakala ngathi kuyacaca ukuba yenzelwe abaphulaphuli bemidlalo. Njengoko Le fowuni izakufika ipholisa ulwelo, eyinto ebaluleke kakhulu kwiifowuni ezilungiselelwe umdlalo, kwaye ngokungathandabuzekiyo iya kuba yenye yezona zinto zibalulekileyo kule fowuni.
UXiaomi ufune ukubheja kwinto engaphezulu kwamandla kunye nokusebenza kolu luhlu luphakathi. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo IMediaTek Helio G90T iqinisekisiwe yiprosesa ukhethelwe le Redmi Qaphela i-8 Pro.
Kwifoto entsha inkampani eyabelane ngayo ngomnxeba uyayibona le plate ipholileyo ingasentla. Ke ngoko, ubukho bayo buqinisekisiwe ngale ndlela, ngaphandle kokuba kuthiwe ngendlela ecacileyo ngumenzi waseTshayina. Iindaba ezimnandi zomnxeba.
Kuba kuyacaca ukuba le Redmi Qaphela i-8 Pro izakusinika ukusebenza okuhle ngalo lonke ixesha. Ukongeza ekusivumeleni ukuba sikwazi ukudlala ixesha elide kunye nefowuni, efanelekileyo kuloo midlalo inemidlalo emide. Kwelinye icala, iprosesa igqithile kwi-Snapdragon 710 kwiimvavanyo, kushiya imvakalelo elungileyo.
Nge-29 ka-Agasti siza kuba nakho ukudibana kwezi fowuni zimbini ngokusemthethweni. Kulindeleke ukuba ngo-Septemba le Nqaku 8 Pro izakwaziswa ngokusesikweni kwimarike. Nangona ezi nkcukacha siza kuzazi ngokusesikweni kwiveki ezayo kwintetho yazo esemthethweni e-China.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Inqaku elibomvu leRedmi 8 Pro liza kufika nokupholisa ulwelo
Ukucoca okokuqala kwi-OnePlus Smart TV